Kaalay baro sida aad ku noqon lahayd qof hanada xikmadaha nolosha - Diblomaasi
Related Topics:Kaalay baro sida aad ku noqon lahayd qof hanada xigmadaha nolosha
U qareemidda dadka Joogga Gaaban
Butaysiga xaraar dibir ah oo adiga ka hortow aan cidina xaarxaaran, waxay leedahay kansho iyo ka hor-imaad mataano ah. Suuragal inuu batal jilicsan kaa horyimaado ama sisib adag. Hal dabshid ayaa kasoo wareegay markii aan bilaabay ololaha u qareemmidda dadka Joogga gaaban. Waxaan daah qaadey takoor guun ah oo haysta bulsho aan horay cidi ugu hadlin. Arammida dahsoonayd ayaan mid daalacan ka dhigay.
Inkasta oo uu buuggu dadbadan weli gaarin haddana bulshadu qaybina way soo dhawaysay, qaybina way hiiftay. Bulshada Soomaaliyeed in dood dhan walba ka dhisan la dhex keeno iyo sheeko kutiri-ku-teen ah la dhex keeno waa iskugu mid. Waayo-aragnimada aan ka dhaxlay arrintaan ayaa ah in Soomaalidu badanaa aysan arkin doodaha oo ay arkaan dood-wadaha.
Intaan ku guda jiray baarista iyo xog-ururinta, waxaan ka dhaxlay in shaqsi ahaan u bislaado dareen gooniyana aan xambaaro. Takoorku nooc yahayba aan noqdo qof dhibsada oo u dareen dhow kuwa uu faquuqu deedafeeyey. Waxaan ka helay dhiirranaan aan ku cabbiro dareenno ay shaqsiyaadka qaar ku adagtahay inay afka Soomariyaan. Waxaan beegaal qaadey takoorka dayr-dhaafka ah ee ay Soomaalidu ku hayso dadka u dhashay dherer gaabnida illaa la gaarsiiyey xad lagu tilmaamay inay yihiin dad aan si wanaagsan loo abuurin(cilinkii Malooke).
Waxaa ii caddaatay in meesha dadkaan ay sallaanka horumarka ka fuuli waayeen ay tahay jid-gooyada bulshada. Waa laga yaabaa inaad isweydiisid maxay tahay jidgooyada bulshada ee dadkaan haysata?
Haddii aad ila jaanqaadid inaad fahanto baa laga yaabaa. Inaad ka duwanaadid caadinimada Soomaalidu la qabatintay ayaaba si dabiici caqabad u ah. Suurayso wiil ama gabadh aan dooran muuqaalkiis/keeda oo cay iyo yasid indhaha ku kala qaadey haddiiba aan dil loogu darin markii ay waddooyinka marayaan. Markii ay culays kala kulmaan xaafadaha dhexdooda, waddooyin, maqaaxiyaha iyo magaalada, waxay ku dhuuntaan guryaha. Ma ahan arrin caddifadeed sheeko ah balse waa arrin baaritaanno iyo xog wareysi ku ogaatay.
Intaasba waxaa dheer inaan anigu shaqsi ahaantayda dhadhamiyey culayska aan ku mutaystay inaan caadinimada ka baxsanahay. Soomaaliya kaliya ma ahan balse waa dunida dhan. Dadka ku dhasha marxaladaan ayaa wajaha caqabado gooniya hase ahaatee umadaha kale ee dunida waa dad horey u bislaadey oo sahlan in laga dhaadhiciyo aqbalaadda kala duwanaanshaha iyo tixgelinta dadka xaaladaha gaar ah la nool.
Waxbarasho, shaqo, guur iyo ku dhex noolaanshihii bulshada ayaa ay culaysyo kala kulmaan. Waxaa intaas dheer in ay yihiin dad rejo beel ah oo ay adagtahay in ay dareenkooda ka hadlaan, kuna filiqsan Soomaaliya gudaheeda. Abwaan Hurre Walanwal oo loogu duurxulay dherer gaabnida, wuxuu ku dooday in muuqaalka iyo raganimada/hawlkarnimada/geed-adaygnimadu kala duwan yihiin oo aan ragga lagu miisaamin muuqaalkooda. Maansadiisii waxaa ka mid ahaa:
Qofka jimidh yaraantaydiyo
Marka hore nin jaajiyiyo
Jifi gaaban baan ahay
Hadiise laysku joor faloo
Jidka nabadu ood galo
Saxiibayaal jar iyo buuriyo
Jid wax qaadayaan ahay
Libaax juuq dhagaystoo
Waayo jeel qabaan ahay
Abris jidhif leh iyo goodiyo
Jalbis gana ah baan ahay
Jinaw iyo god maaciyiyo
Jirid aasanbaan ahay.
Waxaan uga socdaa; markii shaqo la yimaado in qofka lagu qiimeeyo aqoontiisa iyo farsamadiisa. Dunida horumartay waxaa laga guulaystay kalsooni xumada laga qabo qofka bartayar iyada oo la isku xirayo muuqaalka iyo kartida waxqabashada.
Buugga Arammida Dahsoon, wuxuu dadka gaagaaban ula midyahay buuggii its Small
World: All About Midgets ee ay qoreen Walter Bodin iyo Barnet Hershey sanadkii 1934-tii kaas oo dalka Maraykanka saameeyey. Wuxuu ganjeello waawayn u furay dadkii gaagaabnaa oo la ogaaday sida ay ugu dacdaraysan yihiin dalka. Markaas ka dibna tixgelin gaar ah la siiyey weliba dhanka shaqaalaysiinta. Qoraalkoodii aan wax kasoo xigto:
“Maxay noloshooda ka samayn karaan? Dookhoodu si adag ayuu u xadidan yahy. Si ka duwan carruur ta caadiga ah, ma qorshayn karaan xirfadooda mustaqbalka. Albaab kasta
wuu ka xiran yahay. Ma noqonkaraan duuliyaal, askar, koronto yaqaanno, cunto kariyayaal iyo shaqaaleba. Sidoo kale xirfaduhuna waa ay ka xiran yihiin. Dakhtarnimo, gar-yaqaanimo iyo macalinimo iskuul weyka wada xiran yihiin,
la ma ildarna jeesjeeska iyo qoslidda muuqaalkooda kaliya balse waxey u dhimanayaan gaajo.” (Bodin & Hershey 1934, 89–90).
Shaqada se waxaa ka door-roon waxbarashada waayo iyadaa falkisa waddada shaqada iyo aayaha wanaagsan. In dadkaan lagula dadaalo waxbarashada tooska ah ama midda farsamo si ay u noqdaan dad suuqa ka gorgortami kara. Abaabul isku duubni in la helana waa lagama maarmaan.
Ma ahan dooddan mid dhalanteed ah balse waa mid aasatay jirid xoog badan oo biixi ah aqoon ahaan, sooyaal ahaan, dhaqan ahaan iyo kasmo-bulsheed ahaanba.